Daawo Sawirada:Reer Puntland oo aan u kala harin soo dhoweynta Halyeeyada Garowe City Stars,oo Puntland yimi. | puntlandi.com
Daawo Sawirada:Reer Puntland oo aan u kala harin soo dhoweynta Halyeeyada Garowe City Stars,oo Puntland yimi.
Xubno ka tirsan Golaha Xukuumadda Puntland,maamulka Gobolka Nugaal,maamulka degmada Garowe iyo dadweyne gaaraya boqolaal ayaa magaalad Garowe kuso dhoweeyay Halyeeyada Garowe City Stars,ka dib markii maanta ay soo gaareen Garowe.
Dadweynaha ka qayb qaatay soo dhoweynta ayaa watay Caleemo qoyan,Calanka Puntland iyo boorar ay ku sawiran yihiin Cayaaryahanada Garowe.
Boqolaal Gawaari ah ayaa Cayaarayahanada kaso galbiyay Garoonka Diyaaradaha ee Garowe,waxaana Waddooyinka iyo Barxada buuxdhaafiyay dadweyne fara badan.
Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdiqani Xaashi Ciise,duqa degmada Garowe Cabdicasiis Nuur Cilme iyo Wasiirka Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo Cayaaryahanada Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo dadweynaha kula hadlay barxada ayaa sheegay inay si wayn uso dhowaynayan Cayaaryahanada sumcada iyo sharafta uso hoyay umada reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Tababaraha Kooxda Garowe Cabdirashiid Xassan Xirsi ayaa sheegay dadweynaha reer Puntland uga mahadceliyay soo dhoweynta diiran ee loo sameeyay Cayaaryahanada Garowe,wuxuuna sheegay in Garowe ay mudan tahay inay soo gaarto heerka ay ka gaartay tartanka Bariga iyo Bartamaha Afrika.
Wajiyada Cayaaryahnada ayaa laga dheehan karay daren farxadeed,kuwaas oo dareemay inay yimaadeen dhulkooda.
Waxaa xusid mudan in Cayaaryahnada Garowe ay Caasimada keeneen Koobka iyo Bilda ay uso hoyeen umada reer Puntland,waana markii ugu horaysay oo heerkaas ay gaaraan Cayaaryahano Soomaaliyeed.